Barcelona oo ku dhaw saxiixa Joao Cancelo – Gool FM
Barcelona oo ku dhaw saxiixa Joao Cancelo
Liibaan Fantastic December 24, 2016
(Barcelona) 24 Dis 2016 Kooxda Barcelona ayaa ku dhaw dhamaystirka saxiixa daafaca kooxda Valencia ee Joao Cancelo sida uu baahiyay wargayska Sport.
Barcelona ayaa u aragta laacibkaan reer Portugal badalkii ku haboonaa ee Dani Alves kadib markii Vidal uu ku fashilmay inuu buuxiyo booskaas.
Wargayska ayaa intaa ku daray inuu jiro heshiis afka ah oo dhexmaray Joao Cancelo iyo kooxda Barcelona kaas oo ah inuu u saxiixo heshiis 5 sano ah.
Maamulka Barcelona ayaa ku kalsoon in 22 jirkaan uu u qalmo qiimaha ay ku doonayso kooxdiisa oo ah 30 milyan oo euro, Barcelona ayaana si hoose u waday wadahadalada saxiixa daafacaan isbuucyadii la soo dhaafay.
Wakiilka Joao Cancelo ayaa doonayay in laacibku uu ku biiro Barcelona suuqa kala iibsiga ee janaayo balse ma jiro ilaa haatan heshiis dhexmaray Valencia iyo Barcelona taas oo ka dhigaysa in saxiixiisa la dhamaystiro dhamaadka xiliciyaareed kan.
Joao Cancelo ayaa sidoo kale diirada u saaran Chelsea iyo Bayern Munich oo dhankooda xiisaynaya saxiixiisa.
ILA QOSOL: Duwihii Arsenal Eboue oo mar doonay inuu iska dhaafo kubbada cagta si uu Eeyaha ugu xanaaneeyo Boqorada Ingiriiska
Kooxda ugu fiican horyaalka Serie A ilaa iminka oo la soo saaray...(Milan oo midna ku lahayn)